8 arrimood oo ku dhaca gabdhaha kabaha dhaadheer xirta
Home Nolosha 8 arrimood oo ku dhaca gabdhaha kabaha dhaadheer xirta
Marka aad xogtan akhriso dib dambe uma xiran doontid kabo dhaadheer!
Marka aad xirato kabo ciribtoodu dheer tahay waxaad u muuqaneysaa haweeney dheer oo qurux badan, laakiin ma ogtahay dhibaatooyinka ku hoos duugan?
Ha illoobin in caafimaadkaagu uu yahay sheyga ugu muhiimsan noloshaada. Saacado kooban oo dhowr sintimitir oo dhirir ah aad hesho fa’iidada aad ka heleysid waxaa aad uga badan khasaaraha caafimaad ee muddada dheer aad ka dhaxli karto.
Sida ay khubarada sheegeen, waxaa kabaha cidhibta dheer leh lagala kulmaa dhibaatooyinka soo socda:
1- Waxaa kugu dhici kara dhabar xanuun
Wali ma u fiirsatay in marka aad xiran tahay kabaha dhaadheer aad horay usoo qalloocan tahay, muddada aad kabahaas wadato oo dhanna aad sidaas uun tahay?
Sidaas waxay u dhacdaa maadaama aad isku dayeysid inaad yareysid cadaadiska kaa saaran dhabarka marka ay cirbahaagu kor u taagan yihiin.
Marka aad caadi u taagan tahay oo kabo dhaadheer aadan xirneyd dhabarkaagu wuxuu leeyahay qallooc dabiici ah. Laakiin marka aad soo xirato kabahaas waxaad baddaleysaa qaabkaas dabiiciga ah, taasina ugu dambeyn waxay horseedi kartaa dhabar xanuun.
2- Waxa uu dhaawac kaa gaari karaa jilbaha
Mar walba oo aad xidhan tahay kabaha cidhibta dheer leh, jilbahaagu waxay u shaqeynayaan si ka xoog badan sida caadiga ah.
Waxaa suuragal ah in hal mar ay si khaldan kuu wareegto isha jilibka haddii ay kula rogmadaan kabaha.
Khubarada caafimaadku waxay sheegeen in dumarka ay dhaawacyada jilbaha gaadha uga badan yihiin ragga, mid ka mid ah sababaha ugu waaweynna waa kabaha cidhibta dheer leh ee ay haweenku jecel yihiin.
3- Anqowga ayuu dhib kaasoo gaari karaa
Sida iska cad, markii ay kabtu kula rogmato, taasoo mar walba dhici karta, waxay u badan tahay inaad ka murgacatid anqowga.
Inkatoo uu yahay dhaawac aan loo dhimanin haddana waxay qaadan kartaa muddo dheer inaad lugaha dib ugu istaagto.
Waxaa kale oo jira xanuun muddo kaddib ku billaaban kara anqowyadaada, kaasoo ah in ay si joogto ah kuu huraan seedaha gudaha.
4- Simaha ayey saameyn gaari kartaa
Daraasad muddo deer cilmibaadhisteeda la waday ayaa muujisay in dumarka marka ay da’ yar yihiin u badan kabaha cirbaha dhaadheer ay muddo kaddib dareemaan xanuun dhinaca simaha ah.
Simahaagu waa in ay mar walba caafimaad qabaan, booska loogu talagalayna joogaan si aysan awooddaadu isu dhimin.
5- Far yareyda lugta ayaa aad kuu yaraan karta
Cadaadiska cirifka kabaha horay ka xidhan wuxuu carqaladeeyaa habsami u noolaashaha farta ugu dambeysa ee loo yaqaanno far0yareey.
Muddo kaddib waxaa suuragal ah in fartaas ay aad u fool xumaato oo sii yaraato ama in ay noqoto mid adag oo faraha kale aan la mid ahayn.
6- Ciddida suulka lugta oo gudaha u baxda
Suulka lugaha dadka waxaa ku yaalla ciddida ugu weyn, uguna xoog badan. Haddii aad si joogto ah u xirato kabaha dhaadheer waxaa laga yaabaa, dumar badanna ku dhacday, in ciddida ay jirka gudihiisa ku baxdo.
Taasi waxay keeni kartaa dhibaato caafimaad iyo mid qurux labadaba.
Haddii horayba ay ciddiyaha suulashaadu sida aan sheegeyno u noqdeen, ka fiirso inaad mar kale xirato kabahaas.
7- Faraha lugta oo qalloocda
Qallooca faraha wuxuu yimaadaa marka ay muddo dheer farahaagu ciriiri dareemaan oo booskooda dabiiciga ah aysan joogin.
Haddii aad xirato kabaha cidhibta ka dheer waxaa khasab ah in faraha ay hoos isku buuranayaan ayna cadaadis xad dhaaf ah la kulmayaan.
8- Kubabka lugaha oo xididdo yeesha
Inta aad ku taagan tahay kabaha dhaadheer, waxaa si aad ah kala xirmaya qulqulka cadaadiska dhiigga ee jirka ku wareega.
Sidaas darteed muddo kaddib waxaa lugahaaga kasoo muuqan kara xididdo maqaarka kasoo dul maray.
Haddii xaaladdan aad haddaba isku aragto, waxaa kuu habboon inaad xirato kabo isla siman.
Previous article7 eray oo carruurta lagu dhaho caqligooda uu kordho – 7-dan kale ka ilaali
Next article7 Bilyaneer oo aan lacagtooda u isticmaalin sida taajiriinta kale